China TY160-3 Bulldozer Emeputa na Nweta | Xuanhua
TY160-3 bulldozer bụ nke siri ike, ngbanwe ike, ike enyere aka ịchịkwa, onye na-anya ụgbọ mmiri na-achịkwa achịkwa, yana otu njikwa na-achịkwa ụwa. Ọ bụ ụlọ dara oké ọnụ, akara nke oge a na-eme akụkụ mkpuchi ma na-ewusi ike ikpeazụ.
TY160-3 bulldozer bụ nke siri ike, ngbanwe ike, ike enyere aka ịchịkwa, onye na-anya ụgbọ mmiri na-achịkwa achịkwa, yana otu njikwa na-achịkwa ụwa. Ọ bụ ụlọ dara oké ọnụ, akara nke oge a na-eme akụkụ mkpuchi ma na-ewusi ike ikpeazụ. Ọ na-egosipụta arụmọrụ dị elu, ikike njem ka mma, ọrụ dị mfe. Ọ na-arụ mma iji rụkwaa ụgwọ dị ala n'ihi usoro dị mfe na 6pcs track rollers. Ọ bụ ezigbo bulldozer eji na mmanụ ubi, coal akuku, gburugburu ebe obibi na slopi ebe wdg